Umuthi i-Finlepsin Retard: imiyalo esetshenzisiwe > Ukwelashwa nokuvimbela
I-Finlepsin® retard (i-Finlepsin® retard)
Lokhu antiepilepticokususwayo dibenzazepineubuye abe nesimilo antidepressant, antipsychotic, antidiuretic futhi analgesicumphumela. Isenzo somuthi sihlobene ne-blockade. amashaneli e-sodium e-voltage-gated, neqhaza ekuqiniseni ukuqina kwama-membrane ama-neurons overexcited, kwehlisa ukwenziwa kwe-synaptic ye-impulses kanye nokuvinjwa kokukhishwa kwe-serial kwama-neurons. Ukukhishwa kwe-neurotransmitter amino acid kuncishisiwe - glutamateUkuba nomphumela othokozisayo, osiza ekunciphiseni umkhawulo ophazamisayo wesistimu yezinzwa, futhi, ngenxa yalokho, amathuba okubanjwa kwesithuthwane.
Ukusebenza kwesidakamizwa kubonakaliswa ukubanjwa kokuthamba okulula noma okuyinkimbinkimbi, okungahle kuhambisane nesibili generalization njalonjalo. Kulokhu, ukwehla kwezimpawu kwaphawulwa. ukukhathazeka, ukudangala, ukungabinakhofuthiulaka.
Lesi sidakamizwa sivezwa kancane, kepha sigcwele ukumuncwaezimele kokudla. Ukuqoqwa kwento emzimbeni kutholakala kungakapheli amahora ayi-12 ngesicelo esisodwa IFinlepsin Buyisela I-400 mg, ngenkathi igcina ukusebenza ngempumelelo kwezokwelapha amahora angama-4-5. Ngaso leso sikhathi, ukugxila okulinganayo kwento esebenzayo ku-plasma kufinyelelwa ngemuva kwenkambo yokwelapha emavikini angama-1-2. Kodwa-ke, lokhu kungahle kuncike ezimweni zokuguliswa kwesiguli: ukungena ngokuzenzakalela kwezinhlelo ze-enzyme esibindini, ukungeniswa kwe-hetero ngezinye izidakamizwa ezithathwe ngasikhathi sinye, isimo sesiguli, umthamo nesikhathi ubude bokwelashwa. Kwatholakala ukuthi i-carbamazepine idlulela kubisi lwebele nangemgoqo we-placental.
I-metabolism yezidakamizwa yenzeka esibindini ngokwakhiwa kwama-metabolites ayinhloko: i-carbamazepine-10,11-epoxide - ukuhlangana okusebenzayo nokungasebenzi nge glucuronic acid. Njengomphumela wenqubo ye-metabolic, kusungulwa i-metabolite engasebenzi kancane ye-9-hydroxymethyl-10-carbamoylacridane, ekwazi ukunxenxa i-metabolism yayo uqobo. I-Excretion yesidakamizwa yenziwa ikakhulukazi ekwakhekeni komchamo, ngokwengxenye ngamalondolo.
Izinkomba eziphambili zokusebenzisa iFinlepsin:
amafomu ahlukahlukene isithuthwane
Ubuhlungu bokuphazamiseka kwemizwa kwiziguli ezinayo isifo sikashukela
izinhlobo ezahlukahlukene zezimo ezethusayo - iminyakazo, ukubanjwa kokunye nokunye,
Isifo sokuhoxiswa kotshwala,
I-Finlepsin ayinqunyelwe ukuthi:
hypersensitivity ezingxenyeni zalo noma triddclic antidepressants,
ukuphazamiseka kwemithambo ye-hematopoiesis,
isikhathi sokuhlangana porphyria,
Ukusetshenziswa okufanayo kwamalungiselelo we-lithium noma ama-inhibitors we-MAO.
Ukuqwashisa kuyelulekwa ekwelashweni kweziguli ezine-decompensated aakulu kwenhliziyo, i-dilution hyponatremia, isibindi nokukhubazeka kwezinso, asebekhulile, izidakwa ezisebenzayo, ukucindezela i-hematopoiesis yethambo, ngenkathi kuthathwa imithi ethile, i-prostate hyperplasia, ingcindezi ye-intraocular nokunye.
Imiphumela emibi ye-Finlepsin
Njengomthetho, imiphumela emibi ngesikhathi sokwelashwa nalomuthi ingaqhamuka ngenxa yemithamo eyeqisayo noma ukuguquguquka okukhulu kokuqoqwa kwento esebenzayo emzimbeni. Ezimweni eziningi, ukwenzeka kokuphambuka ekusebenzeni kohlelo lwezinzwa kuyaphawulwa: isiyezi,i-ataxia, ukozela, ubuthakathaka obujwayelekile, ikhanda njalonjalo. Ukuboniswa nakho kungenzeka. ukungahambi kahle komzimbangokwesibonelo i-urticaria, i-erythrodermaukuqubuka kwesikhumba nezinye izimpawu.
Uhlelo lwe-hematopoietic negazi lungaphendula ngokuthi: i-leukopenia, i-thrombocytopenia, i-eosinophilia, i-leukocytosis, i-lymphadenopathy. Amathuba wokuphambuka emgodini wokugaya ukudla uhlala: isicanucanu, ukuhlanza, umlomo owomile, khulisa umsebenzi wokudluliswa kwe-gamma-glutamyl, umsebenzi kanye nama-hepatic transaminases, isifo sohudo noma ukuqunjelwa.
Ngaphezu kwalokho, ukuphazamiseka okuhambisana nohlelo lwe-endocrine kanye nemetabolism kungenzeka: ukudumba, ukugcinwa kwamanzi, ukuqina kwesisindo, ukugabha, i-hyponatremia njalonjalo. Ukuthuthukiswa kokuphambuka emisebenzini yezinhlelo zenhliziyo kanye ne-urogenital, uhlelo lwe-musculoskeletal kanye nezitho zomzimba akumele zikhishwe ngaphandle.
Izibhebhe ze-Finlepsin, imiyalo esetshenziswayo (indlela nomthamo)
Lo muthi wenzelwe ukuphathwa ngomlomo, kungakhathalekile ukusetshenziswa kokudla.
Ekwelashweni isithuthwane amaphilisi anqunywe njenge-monotherapy. Uma i-Finlepsin inamathele ekwelapheni i-antiepileptic, khona-ke lokhu kwenziwa kancane kancane, kulawulwa ngokuqinile umthamo. Ezimweni lapho iphilisi lehliwe khona, kufanele liphuzwe ngokushesha, ngoba kukhona okushiwoyo, kodwa akufanele uliphindise idlule ngomuthi ophindwe kabili.
Ngokusho kwemiyalo esetshenzisiwe IFinlepsin Buyisela, iziguli zabantu abadala ekuqaleni kokwelashwa zinikezwa umthamo wansuku zonke we-200-400 mg. Ngemuva kwalokho, ukwanda kancane kancane komthamo kungenzeka, okuvumela ukufeza ukusebenza kahle. Umthamo wokulondolozwa wansuku zonke ngu - 800-1200 mg, ngenkathi leli nani lihlukaniswe ngemithamo ye-1-3. Umthamo omkhulu ovunyelwe nsuku zonke akufanele udlule i-1.6-2 g.
Ezinganeni, umthamo wesidakamizwa uncike eminyakeni yobudala. Ngaphezu kwalokho, lapho kunzima ukuthi ingane iphuze lonke iphilisi, ingahlafunwa, ichotshozwe futhi ichithwe ngevolumu encane koketshezi.
Izingane ezineminyaka engu-1-5 ubudala zinqunyelwe i-100-200 mg, kancane kancane umthamo wansuku zonke uyandiswa ukufeza isenzo esifanele.
Izingane ezineminyaka engu-6 ukuya kwengama-10 ubudala zinconywa ukuthi ziqale ukwelashwa ngomthamo wansuku zonke IFinlepsin Buyisela I-200 mg, khona-ke umthamo nawo uyanda kancane kancane.
Umthamo wokuqala wansuku zonke wezingane ezineminyaka engu-11-15 ubudala ngu-100-300 mg. Ngemuva kwalokho kwandiswa kancane kancane ngu-100 mg kuze kuboniswe umphumela omuhle.
Isilinganiso sokulungiswa okujwayelekile komthamo wansuku zonke: kwiziguli ezincane ezineminyaka engu-1-5 ubudala, ama-200-400 mg, iminyaka engu-6 kuya ku-400-600 mg, iminyaka eyi-11 - 15, ama-600-000 mg, ahlukaniswe ngemithamo eminingana.
Isikhathi sokwelashwa sincike ngqo ezinkombeni nasezimpawu zomuntu ngamunye. Kunoma ikuphi, zonke izinqumo ezihlobene nokwelashwa zihlala ziyisibopho sodokotela. Imvamisa, udaba lokunciphisa umthamo noma ukuyekisa umuthi luxoxwa lapho isiguli singabambeki iminyaka emi-2-3.
Ukuyekiswa kokwelashwa kubandakanya ukwehliswa kancane kancane komthamo, iminyaka eyi-1-2, ngaphansi kokuqashwa njalo kwe-EEG. Kulokhu, izingane kufanele zibheke isisindo esandayo nobudala.
Ngesikhathi sokulashwa kokunye ukuphazamiseka ngokwezinkomba, umthamo nesikhathi ubude bokunqunywa kunqunywa udokotela, kucatshangelwa ubunzima besifo kanye nesiguli esithile.
Nge-overdose ye-Finlepsin, kungavela izimpawu ezahlukahlukene, okubonisa ukwephulwa kwezinzwa, izinzwa zenhliziyo nokuphefumula, izitho zomzwelo nokuphambuka okuvamile.
Lokhu kuyabonakala: ukucindezelwa kohlelo oluphambili lwezinzwa, ukudideka, ukozela, ukuyaluza, ukubona imicabango emibi, ukoma, umbono ofiphele, tachycardiaukwehluleka kwengcindezi yegazi, ukufeyila, ukwehluleka ukuphefumula, i-pulmonary edema, isicanucanu, ukuhlanza, ukugcinwa komchamo nokunye.
Sekutholakele ukuthi asikho isidakamizwa sokulapha ngokweqile, ngakho-ke, ukwesekwa okuqhutshwa kwenziwa kuye ngezimpawu ezibonisiwe, ezimweni ezinzima - esimweni sesibhedlela.
Inhlanganisela yalesi sidakamizwa ne CYP3A4 inhibitors kubangela ukwanda kokuhlushwa carbamazepine ekwakhiweni kwe-plasma yegazi kanye nokuthuthukiswa kokuphendula okungahambi kahle. Inhlanganisela ne inducers of CYP3A4 kuvame ukusheshisa imetabolismcarbamazepine, ukunciphisa ukugxila kwayo kanye nemiphumela yokwelapha.
Ukusetshenziswa kanyekanye i-verapamil, diltiazem, felodipine, dextropropoxyphene, viloxazine, fluoxetine, fluvoxamine, cimetidine, acetazolamide,danazole, desipramine, i-nicotinamide, futhi ama-macrolides - erythromycin, josamycin, clarithromycin, troleandomycin, amanye ama-azoles - itraconazole, ketoconazole futhi fluconazole kungandisa kakhulu ukugxilwa carbamazepinekodwa. Isenzo esifanayo sibonisa terfenadine, loratadine, isoniazid, propoxypheneujusi wamagilebhisi, ama-viral proteinase inhibitors. Kulokhu, ukulungiswa komthamo nokulawulwa kokuhlakazwa kwento ku-plasma kuyadingeka.
Inhlanganisela ingahle iholele ekwehlisaneni noma ekhuphukeni kokuhlushwa. felbamate futhi carbamazepine.
Ukuhlushwa okuphansi carbamazepine futhi: phenobarbital, primidone, metsuximide, phenytoin, fensuximide, theophylline, chisplatin, doxorubicin,rifampicin, clonazepam, i-valproic acid, i-valpromide, i-oxcarbazepine namalungiselelo amaningi amakhambi aqukethe i-Hypericum perforatum.
Carbamazepine kunciphisa ukuhlangana kwe-plasma yezidakamizwa ezifana:i-clobazam, i-clonazepam, i-ethosuximide, i-primidone, i-digoxin, i-valproic acid, i-alprazolam, i-cyclosporine, i-tetracycline, i-haloperidol,amalungiselelo omlomo aqukethe estrogen futhi iprogesterone njalonjalo.
Kuyasungulwa lokho tetracyclines yenza buthaka umphumela wokupholisa carbamazepine. Sebenzisa nge paracetamol kwandisa ingozi yemiphumela enobuthi esibindini, kunciphisa ukusebenza kahle kwezokwelapha. Inhlanganisela ne phenothiazines, pimozide, molindone, clozapine, haloperidol, thioxanthenes, maprotilinefuthi triddclic antidepressants sithuthukisa umphumela wokuvimbela ohlelweni lwezinzwa, senze buthaka umphumela wokubulala izidakamizwa.
Ngakho-ke, lapho i-Finlepsin ibekelwe iziguli, kuyadingeka ukwazisa udokotela ngokushesha ukuthi imiphi imishanguzo abasayiphuza.
Ama-analogues amakhulu aseFinlepsin amelelwa izidakamizwa: I-Actinval, Apo-Carbamazepine, Zagretol, Zeptol, Carbalepsin retard, Carbamazepine, Mazepin, Stazepin, Storilat, Tegretolnabanye.
Kuyasungulwa lokho carbamazepinekunciphisa ukubekezelelwa kwe-ethanol. Kepha futhi ukuphuza utshwala ngesikhathi sezifo kuboniswe kuso lesi sidakamizwa, singalindela ukuthuthukiswa kwemiphumela emibi kanye nezinkinga ezahlukahlukene.
Ezimweni eziningi, abasebenzisi bashiya impendulo mayelana IFinlepsin Buyiselabona noma ababathandayo bathatha iminyaka eminingana. Ezinye iziguli ziyahlupheka isithuthwane, uqaphele ukuthi ukuthatha lesi sidakamizwa kuthinta ngokungafanele umsebenzi wabo wokuqonda, okuholela ekukhuleni kokunganaki kanye nokukhubazeka kokuxhumana komphakathi. Noma kunjalo, ngaphandle kwalezi zimpawu, iziguli ziqinisekisa ukusebenza kahle komuthi, ukuvumela ukuthi ukhohlwe ngokuhlaselwa.
Kukhona ukubuyekezwa lapho i-Finlepsin isetshenziswa ekwelapheni ukuhlaselwa ukwethuka okuhambisana nokwesaba ukuvula noma, ngokuhlukile, izikhala ezivalekile. Ngenxa yokwelashwa, ezimweni eziningi ukwethuka kuyanyamalala, noma kunjalo, ukungazinzi okuthile ku-gait kuyaqhubeka nokukhathazeka.
Ngakho-ke, i-Finlepsin ingenye yezidakamizwa ezivame kakhulu ze-anticonvulsant kanye ne-antiepileptic esetshenziswe ngempumelelo ekuziphatheni komtholampilo. Ngokusho kochwepheshe, ukwelashwa ngaleli thuluzi elithile kukuvumela ukuthi uzuze imiphumela emangalisayo. Into esemqoka ukulandela ngokuqinile yonke imiyalo kadokotela, maqondana nemithamo yoshintsho lwezidakamizwa nendlela yokuphila, ukwazi kahle ukuthi kungani amaphilisi e-Finlepsin futhi awathathe ngokuya ngezinkomba.
Ukukhishwa kwefomu nokwakhiwa kwemithi
I-Finlepsin Retard iyatholakala ngesimo samathebulethi okuphatha ngomlomo. Amacwecwe amhlophe, ayindilinga, futhi ayingozi ngakolunye uhlangothi, agcwele izingcezwana zezingcezu eziyi-10 (5) ebhokisini lekhadibhodi. Isichasiselo esencazelo eningilisiwe sinamathele kulo muthi.
Ithebhulethi ngayinye iqukethe isithako esisebenzayo iCarbamazepine 200 mg noma i-400 mg, kanye nezingxenye ezisizayo: i-microcrystalline cellulose, i-magnesium stearate, i-gelatin.
Umthamo womuthi ubekwa ngudokotela ngokwahlukana, kuye ngezimpawu zomzimba wesiguli nokuxilongwa.
Umthamo wokuqala womuthi kubantu abadala nakwentsha engaphezu kweminyaka eyi-14 ngu-100-400 mg ngosuku. Uma ungekho umphumela wokwelapha noma umphumela onganele ngaphansi kokuqondisa kukadokotela, umthamo unyuswa ngama-200 mg ngosuku ngokuphumula kwesonto eli-1. Ngokuya kumthamo wansuku zonke, umuthi uhlukaniswe ngemithamo ye-1-4, kunconywa ukugwinya ithebhulethi ngokushesha ngenani elanele lamanzi.
Ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-6 ubudala, umthamo womuthi ubalwa ngesisekelo sezinkomba zesisindo somzimba - 10 mg / kg ngosuku, umthamo owamukelwe uhlukaniswe ngemithamo engu-2-3. Izingane ezisukela eminyakeni eyisithupha kuya kwengu-14 ubudala zinqunywa imishanguzo engama-200 mg ngosuku, umthamo uhlukaniswe ngemithamo emibili. Uma umphumela unganele, ngemuva kweviki elingu-1 umthamo wezidakamizwa ungandiswa nge-100 mg. Umthamo omkhulu wansuku zonke wezingane yi-1 g, kubantu abadala - 1200 mg.
Akunasipiliyoni ngokusetshenziswa kwalesi sidakamizwa ukwelashwa kwabesifazane abakhulelwe ku-trimester yokuqala futhi ukuphepha kwe-carbamazepine kwengane akukafakazelwa.
Ukusetshenziswa kwamacwecwe we-Finlepsin Retard ku-2nd ne-3 trimesters of ukukhulelwa kungenzeka kuphela uma kunezinkomba ezibucayi, esimweni lapho izinzuzo zikamama zidlula kude nezingozi ezingaba khona kumntwana ongakazalwa. Umuthi ungasetshenziswa kumthamo osebenza kancane ngendlela ye-monotherapy.
Abesifazane abelashwa ngama-Finlepsin Retard amaphilisi kufanele basebenzise izindlela zokuvimbela inzalo ezisezingeni eliphakeme ukuvikela ukukhulelwa. Uma ukukhulelwa kwenzeka, khona-ke owesifazane kufanele abonane nodokotela ngokushesha ayeke ukuthatha umuthi.
I-Carbamazepine ingafakwa kubisi lwebele, ngakho-ke akunqweneleki ukusebenzisa amaphilisi e-Finlepsin Retard kwabesifazane ngesikhathi sokuqunjelwa. Uma ukwelashwa kudingekile, ukuncelisa ibele kunconywa ukuthi kuphazanyiswe ukuze kungalimazi ingane.
Ngesikhathi sokuthatha amaphilisi we-Finlepsin retard ezigulini ezinokuzwela ngakunye kwezakhi zomuthi, imiphumela emibi ingahle ibe khona:
kusuka ohlelweni lwezinzwa - ukozela, ukunganaki kulokho okwenzekayo, i-ataxia, isiyezi, umbono ophindwe kabili, ukukhanda, ukuthimula kwemilenze ngokuzithandela, ukuphazamiseka kokuhlala, i-paresis, ukukhishwa kwezimpawu, i-neuritis, ubuthakathaka bemisipha, ukudangala, ukuphazamiseka, ukunambitheka kokunambitha ezingeni le-receptor, umsindo nokukhala ezindlebeni
kusuka emgudwini wokugaya ukudla - i-glossitis, i-stomatitis, ukuncipha kokudla, ukushaya kwenhliziyo, isicanucanu, ukuhlanza, isifo sokusha kwesibindi, isisu esiswini, umsebenzi owengeziwe wama-hepatic transaminases, ukuphazamiseka kwesisu,
kusuka ohlelweni lwenhliziyo - ukuphazamiseka kwesigqi senhliziyo, ibhulokhi ye-atrioventricular, ukungasebenzi kahle kwemithambo yethambo, i-thrombophlebitis, i-thromboembolism, ukukhula kokuhluleka kwenhliziyo,
kusuka ezithweni ze-hemopoietic - ukwehla kwenani lama-leukocytes, ama-platelet, ama-agranulocytosis, i-anemia, i-hemolytic anemia,
I-endocrine system kanye ne-metabolism - i-hyponatremia, ukungasebenzi kahle kwe-calcium metabolism, i-gynecomastia, i-galactorrhea, ukungasebenzi kahle kwe-thyroid, ukukhuphuka kwe-cholesterol, i-edema, ukugcinwa kwamanzi,
kusuka ezithweni zomchamo - umsebenzi wezinso okhubazekile, ukwehluleka kwezinso, i-nephritis esezingeni eliphakathi,
ukungahambi kahle komzimba - ukuqubuka kwesikhumba, ukulunywa, ukuvuvukala kwama-lymph nodi, ubomvu besikhumba.
Uma kwenzeka imiphumela emibi eyodwa noma ngaphezulu, isiguli kufanele sibonane nodokotela ukuze athole izeluleko.
Ukuhlukaniswa kwe-Nosological (ICD-10)
Amacwecwe wokukhishwa aqinisekisiwe Ithebhu eli-1.
ababukeli:I-Eudragit ® RS30D (ethyl acrylate, methyl methacrylate kanye ne-trimethylammonioethyl methacrylate Copolymer (1: 2: 0.1) - 11/22 mg, triacetin - 2.2 / 4.4 mg, talc - 15.6 / 31.2 mg, I-Eudragit ® L30D-55 (I-methaconic acid ne-ethyl acrylate Copolymer) - 35/70 mg, MCC - 21.8 / 43.6 mg, crospovidone - 12.4 / 24,8 mg, i-colloidal silicon dioxide - 1.33 / 2.66 mg, i-magnesium stearate - 0.67 / 1.34 mg
Ukuphuza kuhamba kancane kepha kuphelele (ukudla akusithinti kakhulu isilinganiso nobukhulu bokufakwa). Ngemuva komthamo owodwa wephilisi Cmax kufinyelelwe ngemuva kwamahora angama-32max into esetshenziswayo engashintshiwe ngemuva komthamo owodwa ka-400 mg we-carbamazepine cishe u-2,5 μg / ml. Css umuthi ku-plasma ufinyelelwa emavikini angama-1-2, izinga lokufinyeleleka kuncike ezimweni eziqondile zokwenziwa komzimba (ukufakwa okuzenzakalelayo kohlelo lwezinzwa zesibindi, ukufakwa kwe-hetero ngezinye izidakamizwa ezisetshenziswe ngasikhathi sinye), futhi ngesimo sesiguli, umthamo womuthi nesikhathi sokulashwa. Ukwehluka okubalulekile kumanani we-C kuyabonwa.ss ebangeni lokwelashwa: ezigulini eziningi, la manani aqala ku-4 kuye ku-12 μg / ml (17-50 μmol / l). Ukugxila kwe-carbamazepine-10,11-epoxide (chemacologic metabolite esebenzayo) cishe kungama-30% wokuhlushwa kwe-carbamazepine.
Ukuxhumana namaprotheni e-plasma ezinganeni - 55-59%, kubantu abadala - 70-80%.
Kubonakala ngathi Vd - 0.8-1.9 l / kg. Ukuqanjwa kwendalo kudalwa kuketshezi lwe-cerebrospinal kanye namathe, okuhambisana nenani lezinto ezisebenzayo ezingenakuvinjwa ngamaprotheni (20-30%). Ingena ngomgoqo we-placental. Ukugxila ebisini lobisi kungama-25-60% alokho ku-plasma.
It is metabolised in theibindi, ikakhulukazi emzileni we-epoxy ngokwakhiwa kwama-metabolites aphambili: i-carbamazepine-10,11-epoxide engasebenzi kanye ne-glucuronic acid engasebenzi. I-isoenzyme eyinhloko enikeza i-biotransformation ye-carbamazepine ku-carbamazepine-10,11-epoxide yi-cytochrome P450 (CYP3A 4). Njengomphumela walokhu kuphendulwa kwe-metabolic, i-metabolite ye-9-hydroxymethyl-10-carbamoylacridane nayo iyakhiwa, enomsebenzi obuthaka we-pharmacological.
I-Carbamazepine ingayenga imetabolism yayo. T1/2 emva kokuphathwa ngomlomo komthamo owodwa kungamahora angama-60-100 (ngokwesilinganiso cishe amahora angama-70), ngokuphathwa isikhathi eside kweT1/2 iyancipha ngenxa yokuvuselelwa kwe-system enzyme yesibindi. Ngemuva kokulawulwa okukodwa komlomo kwe-carbamazepine, ama-72% omthamo othathwe akhishwa emchameni futhi angama-28% ezinduneni, cishe ne-2% yomthamo okhishwa emchazweni njenge-carbamazepine engashintshiwe, cishe u-1% ngesimo se-metabolite eyi-10.11-epoxy metabolite.
Akunabufakazi bokuthi ama-pharmacokinetics wokushintshwa kwe-carbamazepine ezigulini esezikhulile.
Izinkomba Finlepsin ® buyisela
isithuthwane (ukuhlukunyezwa okuyisisekelo okuyisisekelo (ngaphandle kokungabikho), izindlela ezithile zesifo sokuwa (ukuhlukunyezwa okulula nokuyinkimbinkimbi), ukubanjwa kokunye okuhlanganisiwe okuyisisekelo),
idiopathic glossopharyngeal neuralgia,
Ubuhlungu obuhambisana nokulimala kwezinzwa ezephelele kushukela, ubuhlungu be-neuropathy yesifo sikashukela,
ukuqunjelwa kwe-epileptiform in multiple sclerosis,
imisipha yobuso ene-neuralgia ye-trigeminal,
ukwehliswa kwethoni, ukuphazamiseka kwengqondo kweparoxysmal yenkulumo nokunyakaza (i-paroxysmal dysarthria ne-ataxia),
paroxysmal paresthesias kanye nemikhandla yezinhlungu,
I-syndrome yokuhoxiswa kotshwala (ukukhathazeka, ukwehluleka, i-hyper excitability, ukuphazamiseka kokulala),
ukukhubazeka kwengqondo (ukuphazamiseka okuphathelene nokukhubazeka kanye nokuphazamiseka kwengqondo, ukuphazamiseka kwengqondo, ukuphazamiseka kohlelo lwe-limbic).
Khipha ifomu nokwakheka
IFinlepsin retard iyatholakala ngesimo samathebhulethi akhululwa isikhathi eside: kusuka kumhlophe kufana ne-tint ephuzi kuye kumhlophe, isicaba, kuyindilinga, imiphetho yamathebulethi idalulwe, kufakwa ubungozi bokuhlukanisa uhlangothi nhlangothi zombili, izikejana ezi-4 ebusweni bezinto eziseceleni (izingcezwana eziyi-10, kumakhadibhodi iphakethe lama-3, 4 noma ama-5 blisters).
into esebenzayo: carbamazepine - 200 noma 400 mg,
izakhi ezisizayo: i-triacetin, Copolymer Eudragit RS30D methylryacaclate, ethyl acrylate kanye ne-trimethylammonioethyl methacrylate (1: 2: 0), Copolymer Eudragit L30D-55 (ethyl acrylate, methaconic acid), crospovidone, silicon diokside cellet.
Imiyalo yokusebenzisa iFinlepsin retard: indlela nomthamo
Amaphilisi we-Finlepsin retard ama-200 mg noma ama-400 mg athathwa ngomlomo ngesikhathi noma ngemuva kokudla bese ehlanjwa ngenani elanele lamanzi, ujusi noma olunye uketshezi.
Uma kunesidingo, ukuhlakazwa kokuqala komthamo wesidakamizwa ku-keyisi kuvunyelwe, impahla yayo ekhemisi ayephulwa.
Umthamo wansuku zonke uhlukaniswe ngemithamo ye-1-2. Umthamo omkhulu wansuku zonke ngu-1.6 g.
I-dosing enconywayo yansuku zonke:
Ukwelashwa kwesithuthwane. Abantu abadala: umthamo wokuqala (kanye, kusihlwa) ngu-0-0-0.4 g, umthamo kufanele ukhuliswe kancane kancane kuze kutholakale umthamo onikeza umphumela wokwelapha ofanele esigulini. Uhla lomthamo wokulondolozwa ngu-0.8-11 g g. Uhlukaniswe ngemithamo emi-2: 0,2-0.6 g kusihlwa bese kuthi ngu-0.4-0.6 g kusihlwa. Izingane: umthamo wokuqala wezingane 6-5 iminyaka (kanye, kusihlwa) - 0,2 g, umthamo uvuswa kancane kancane (0,1 g ngosuku) ukufezekisa umphumela omuhle. Umthamo wokulondolozwa kwezingane ezineminyaka engu-6-10 ubudala ngu-0,4-0.6 g, uhlukaniswe ngemithamo emi-2 kule ngxenye elandelayo: ekuseni - 0,2 g kuthi kusihlwa - 0,2-0.4 g. izingane ezineminyaka engu-11 kuya ku-15 kuya ku-0,6-1 g: ekuseni - u-0-0-0.4 g, kusihlwa - 0.4-0.6 g. Isikhathi sokwelashwa sincike esimweni somtholampilo wesiguli kanye nokubekezelelana komuntu ngamunye . Kunikezwa umuthi we-Finlepsin retard njenge-monotherapy. Ukwethulwa kwezidakamizwa ekwelashweni kwe-antiepileptic osekuvele kwenziwa kufanele kwenziwe kancane kancane, uma kunesidingo, kulungiswa umthamo wezidakamizwa ezihlangene. Uma uphuthelwa umthamo olandelayo, ungawathatha uma ungahambelani nokuphathwa kanyekanye komthamo ophindwe kabili womuthi. Udokotela wenza isinqumo sokudlulisela isiguli kwelashwa kwe-Finlepsin retard, isikhathi sokusetshenziswa noma sokumisa ukwelashwa ngemithi ngawodwana. Kungenzeka wehlise umthamo noma ukhansele umuthi kuphela ngokungabikho ngokuphelele kokuthakathiwe phakathi kweminyaka engama-2-3. Ukwelashwa kumisiwe iminyaka engu-1-2, kunciphisa kancane kancane umthamo ophethwe yi-electroencephalography. Ezinganeni, ngokwehla komthamo wansuku zonke, kuyadingeka ukuthi unake ukwanda okuhlobene nobudala kwesisindo somzimba,
ukuqunjelwa kwe-epileptiform nge-sclerosis eminingi: 0.2-0.4 g,
i-trigeminal neuralgia ne-idiopathic glossopharyngeal neuralgia: umthamo wokuqala ngu-0-0-0.4 g, ukukhuphuka kwabo kuboniswa kuze kube yilapho izinhlungu ziphela ngokuphelele. Umthamo omkhulu wansuku zonke ngu-0.8 g. Umthamo wokulungisa uvame ukuyi-0,4 g. Umthamo wokuqala ezigulini esezikhulile noma ngokuzwela umuntu ngamunye esenzweni se-carbamazepine kufanele ube ngu-0,2 g kanye ngosuku,
i-pain syndrome ku-neuropathy yesifo sikashukela: i-0,2 g ekuseni ne-0,4 g kusihlwa. Ezimweni ezihlukile, ukufeza umphumela wokwelapha, i-Finlepsin retard iboniswa ekuseni nakusihlwa ku-0,6 g,
ukwelashwa kwe-syndrome yokuqeda utshwala endaweni yesibhedlela: imvamisa i-0.6 g (i-0,2 g ekuseni ne-0,4 g kusihlwa), ezimweni ezinzima, ku-1,2 g ezinsukwini ezimbalwa zokuqala. Umuthi ungahlanganiswa nezinye izidakamizwa ezisetshenziselwa ukwelapha ukuhoxiswa kotshwala. Awukwazi ukuhlanganisa ukubuyiswa kwe-Finlepsin nama-sedative nama-hypnotics. Ukuqapha ngokucophelela isimo kwengqondo sesiguli kufanele kuqinisekiswe. Ukwelashwa kufanele kuhambisane nokuqapha njalo kwezinga le-carbamazepine ku-plasma yegazi,
i-psychoses (ukwelashwa nokuvimbela): umthamo wokuqala nokulungiswa ngu-0-0-0.4 g. Umthamo ophelele wansuku zonke ngu-0,8 g.
Izinga lethonya le-carbamazepine ekwakhiweni kwesifo se-antipsychotic malignant, ikakhulukazi uma lihlanganiswa nama-antipsychotic, alikasungulwa.
Ukuthuthukiswa kwemiphumela emibi evela ohlelweni oluphambili lwezinzwa kungabangelwa ukweqisa kwesidakamizwa noma ukuguquguquka okukhulu kwezinga lokuhlushwa kwe-carbamazepine ku-plasma yegazi.
Ukuqokwa kwe-Finlepsin retard kungenziwa kuphela uma udokotela ebhekwe njalo ngesimo sesiguli.
Ngokuphikisana nesizinda sokusetshenziswa kwesidakamizwa, kunobungozi bokuzama ukuzibulala noma izinhloso, indlela okwenzeka ngayo engaziwa. Iziguli, imindeni yabo nabasebenzi kufanele baziswe ngalokhu nokuthi kufanele bafune usizo lwezokwelashwa ngokushesha uma kuvela izimpawu zokuzibulala.
Ukukhetha umthamo wokutholwa wokuqala wokulungisa nowokunikeza umphumela omuhle, kungakuhle ukuthi unqume izinga le-carbamazepine ku-plasma yegazi, ikakhulukazi lapho i-Finlepsin ibekwa njengengxenye yokwelashwa okuhlanganayo, ngoba ngomsipha osheshisiwe obangelwa ukutholwa kwama-enzymes wesibindi we-microsomal noma ukusebenzisana kwezidakamizwa ezisetshenziswe kanyekanye umthamo ohluke kakhulu kwithosi elinconyiwe liyadingeka.
Ukukhanselwa okungazelelwe kweFinlepsin retard kungabangela ukubanjwa kwesithuthwane, ngakho-ke uma udinga ukuphazamisa ngokushesha ukwelashwa kweziguli, kufanele udlulisele komunye umuthi olwa namagciwane ngaphansi kwesembozo se-intravenous (iv) noma i-rectal ukuphathwa kwe-diazepam, i-phenytoin (iv) noma ezinye izindlela ezikhonjiswe ezimweni ezinjalo.
Ukusetshenziswa kotshwala kuphambene nokuphikisana nesizinda sokusebenzisa umuthi.
Ushintsho ekwelashweni nge-carbamazepine lwenziwa ngokunciphisa kancane kancane umthamo owawuthathwe ngaphambili ngamaphilisi e-antiepileptic.
Abesifazane besikhathi sokuzala akufanele basebenzise inzalo yokuvimbela inzalo yomlomo wamahomoni, ngoba abanikezeli izindlela zokuvimbela inzalo futhi kungadala ukopha okuphakathi.
Amaphilisi kufanele ahambisane nokuqashwa njalo kwezinkomba zomsebenzi wesibindi, ikakhulukazi ezigulini esezikhulile kanye neziguli ezinomlando wesifo sesibindi. Ngokukhula kwesifo esibi sesibindi, i-Finlepsin retard kumele ikhanselwe ngokushesha.
Lapho unquma umuthi phakathi kwamaviki awu-4 okuqala ukwelashwa, ngesonto bese kuthi kanye njalo emavikini ama-4, kuyadingeka ukuthi kwenziwe uhlolo lwegazi ukuthola izinkomba zokubala kweplatelethi, i-reticulocytes, i-iron, i-urea kanye nokuhlushwa kwama-electrolyte ku-serum yegazi. Ngaphezu kwalokho, i-urinalysis ejwayelekile, i-electroencephalography iyadingeka.
Ukwelashwa kufanele kuyekwe i-leukopenia enezimpawu zomtholampilo we-pathology esithathelwanayo noma i-leukopenia eqhubekayo.
Ukuvela kokuphendula kwesikhumba okumpofu ngendlela yokuqhuma kwe-macular noma i-maculopapular ngokuvamile akudingi ukukhishwa kwe-Finlepsin retard, izimpawu ziyanyamalala ngokwazo, kubandakanya nokuncipha komuthi womuthi. Ngalesi sikhathi, isiguli sidinga ukwelashwa kukadokotela. Uma uhlangabezana nokusabela kwe-hypersensitivity, izimpawu zeStevens-Johnson syndrome noma iLyell syndrome, kufanele uyeke ukuthatha amaphilisi.
Udokotela kufanele azise isiguli ngokuthuthuka kokusabela okunobuthi, ukubonakaliswa kwezimpawu zokuqala zazo ezingaba ngumkhuhlane, ukuqubuka, umphimbo, ukuqina kwezimpawu zomlomo womlomo, ukuvela kwe-hematomas, hemorrhages noma i-purpura. Ukuxilongwa ngesikhathi kulezi zimpawu, kufanele uthintane nodokotela.
Ngaphambi kokuqala ukwelashwa, isiguli sinconywa ukuba sihlolwe ngamehlo, kubandakanya nokulinganiswa kwengcindezi ye-intraocular kanye nokuhlolwa kwe-fundus. Ngomfutho okhuphuka we-intraocular, kumele ubhekelwe njalo ngenkathi uthatha i-carbamazepine.
Kwezifo ezinzima zesistimu yezinhliziyo, ukulimala kwesibindi kanye (noma) nezinso, kanye nabantu asebekhulile, kunconyelwa ukusebenzisa i-Finlepsin retard ngemithamo ephansi.
Ukuzimisela njalo kwezinga le-carbamazepine ku-plasma kuyelulekwa uma kukhona izinsolo zokuphulwa kokutholwa kwalo, ukulawula ukujwayezwa kokudla izidakamizwa ngesiguli, ngokunyuka okukhulu kokuthathwa, ngesikhathi sokukhulelwa, ekwelashweni kwezingane, kube nezimpawu zokuphendula okunobuthi.
Ngokusebenzisa kanyekanye i-Finlepsin retard:
ama-inhibitors e-isoenzyme CYP3A4: angaba nomthelela ekwandeni kwezinga le-carbamazepine ku-plasma yegazi kanye nokuthuthukiswa kokuvela okungathandeki,
inducers ye-CYP3A4 isoenzyme: kungadala ukwanda kwe-metabolism ye-carbamazepine kanye nokwehla komgudu wayo we-plasma kanye nemiphumela yokwelapha. Kodwa-ke, lapho sikhanseliwe, ukwanda kokuhlushwa kwe-carbamazepine kwenzeka, njengoba isilinganiso se-biotransformation yaso siyancipha,
Ama-inhibitors we-MAO: angadala ukukhula kwezinkinga ze-hyperthermic and hypertensive, seizures, can dieal, Ngakho-ke, isikhathi esiphakathi kokudla kwabo kumele kube okungenani amasonto amabili,
Ukulungiswa kwe-lithiamu: kubangela ukwanda komphumela we-neurotoxic womuthi ngamunye,
i-verapamil, i-nicotinamide, i-diltiazem, i-desipramine, i-felodipine, i-danazole, i-dextropropoxyphene, i-acetazolamide, i-viloxazine, i-cimetidine, i-fluoxetine, i-fluvoxamine. , i-propoxifene, i-ritonavir namanye ama-protease inhibitors ekwelapheni ukutheleleka kwegciwane lesifo somzimba kubantu: akhuphule ukugcwala kwe-carbamazepine ku-plasma yegazi, ngakho-ke, ukuqapha kwezinga le-carbamazepine ku-plasma noma ukulungiswa kwendlela yakhe yokudla,
I-valproic acid, i-primidone: Ukususa i-carbamazepine kusuka ekuxhumaneni namaprotheni e-plasma, kungakhuphula ukuqina kwe-metabolacologic metabolite (carbamazepine-10,11-epoxide) kanye nokuthuthukiswa kwemiphumela emibi kakhulu,
i-phenobarbital, i-primidone, i-phenytoin, i-metsuximide, i-fensuximide, i-rifampicin, i-theophylline, i-chisplatin, i-doxorubicin, i-clonazepam, i-valpromide, i-oxcarbazepine, i-valproic acid, amalungiselelo aqukethe i-wort yaseSt.
i-felbamate: ibangela ukwehla kwezinga le-carbamazepine kanye nokwanda kokuqukethwe kwe-carbamazepine-10,11-epoxide ku-plasma yegazi, ukwehla kanyekanye kokuhlushwa kwe-serum yegazi kanye nomphumela we-felbamate kungenzeka,
I-isotretinoin: ishintsha i-bioavailability kanye (noma) nokukhishwa kwe-carbamazepine, carbamazepine-10,11-epoxide,
i-phenothiazine, i-pimozide, i-thioxanthenes (i-chlorprotixen), i-molindone, i-haloperidol, i-maprotiline, i-clozapine, i-antidepressants ye-triceclic: yenza buthaka umphumela we-anticonvulsant womuthi, okwandisa umphumela wokuvimbela ohlelweni oluphambili lwezinzwa,
i-clobazam, i-clonazepam, i-prednisone, i-digoxin, i-ethosuximide, i-prednisolone, i-valproic acid, i-prednisolone, i-alprazolam, i-dexamethasone, i-cyclosporine, i-methadone, i-doxycycline, i-haloperidol, i-theophylline, i-contraceplication yomlomo ene-estrorochenoric, i-orcyochenoric. ), i-topiramate, i-lamotrigine, i-tricclic antidepressants (i-amitriptyline, imipramine, i-clomipramine, i-nortriptyline), i-clozapine, i-oxcarbazepine, i-tiagabin, i-protease inhibitors - i-indinavir, i-ritonavir ne-saquinavir, i-levothyroxine, b i-calcium channel locators dihydropyridine derivatives (felodipine), midazolam, olanzapine, tramadol, praziquantel, risperidone, ziprasidone, itraconazole: yehlisa amazinga abo e-plasma kanye nemiphumela yabo yokwelapha,
i-tetracyclines: kunganciphisa umphumela wokwelapha we-carbamazepine,
Izidakamizwa ze-myelotoxic: imbangela yokubonakaliswa kwe-hematotoxic kwe-carbamazepine,
ama-anticoagulants angaqondile, izindlela zokuvimbela inzalo ze-hormonal, i-folic acid, praziquantel: shesha imetabolism yakho,
paracetamol: isheshisa imetabolism yayo, okuholela ekwandeni kwengozi yemiphumela enobuthi esibindini kanye nokwehla kokusebenza kahle kokulashwa kwe-paracetamol,
i-hydrochlorothiazide, furosemide (i-diuretics): ineqhaza ekuthuthukiseni i-hyponatremia ngokubonakaliswa kwemitholampilo,
i-pancuronium nezinye izinto ezivuselela izicubu zomzimba ezingeyona-depolarizing: yenza buthaka umphumela wayo, ukulungiswa kwamthamo kuyadingeka,
ama-hormone e-thyroid: angakhuthaza ukuqedwa,
i-enflurane, i-halothane, i-fluorotan (i-anesthetics): isheshise imetabolism yakho, ikhulisa ingozi yemiphumela ye-hepatotoxic,
i-methoxyflurane: inyusa ukwakheka kwama-metabolites ayo ane-nephrotoxic,
I-isoniazid: ithuthukisa umphumela wayo we-hepatotoxic,
I-ethanol: yandisa umphumela wayo.
Ama-analogue of retard kaFinlepsin yiFinlepsin, Carbamazepine, Apo-Carbamazepine, Carbalepsin retard, Zagretol, Zeptol, Mazepin, Tegretol, Stazepin, Storilat.
Yini i-Finlepsin Retard
I-Finlepsin, ebhalwe kwi-radar njenge-Finlepsin retard, ingeqembu le-pharmacological lezidakamizwa ze-antiepileptic ezilawula ukuguquguquka kwemizwa, ukunciphisa ukudonsa, izinhlungu nezinye izibonakaliso ze-neuralgia. Umuthi ngemuva kokuqala kokuphatha une-anticonvulsant, antidepressant, analgesic effect.
Abantu abanezifo ze-neuralgic baphawula ukuthi izinhlungu ziyancipha, ukukhathazeka kuyancipha. Isakhi esisebenzayo seFinlepsin sisiza ukuvimba iziteshi zesodium ezincike ekuthembekeni, siqinisa ulwelwesi lwama-neurons we-overexcited, sinciphise ukuhanjiswa kokuvumelanisa, futhi sinciphise amathuba okuqamba nokuphindaphinda ukubanjwa kokuwa.
Igama elingelona ilungelo lokuphathelene nalo muthi, noma i-INN - i-carbamazepine, isithako esisebenzayo sikaFinlepsin. Njengoba kusetshenziswa izakhi ezisizayo:
Ngemuva kwezinsuku eziyi-1-2 zokuphatha, i-carbamazepine imunca kancane emzimbeni, kuthi ngemuva kweviki elilodwa ukugxilwa kwegazi lesiguli kwanele kube nomphumela wokwelapha. Inokukwazi ukungena ekuvinjelweni kwe-placental, ngakho-ke i-Finlepsin kufanele ithathwe ngokuqapha ngesikhathi sokukhulelwa, qiniseka ukubonisana nodokotela.
I-Finlepsin iyatholakala ngesimo samaphilisi aphuzi noma amhlophe anomphumela owenziwe isikhathi eside, ngomthamo ka-200 no-400 mg wento esebenzayo. Ihlamvu ngalinye liqukethe izingcezu eziyi-10. Leyo enomthamo ophansi imvamisa ibekelwe izingane nabantu abanezinkinga ezincane zemizwa ekuqaleni kokwelashwa, ukuze kungabangeli izinkinga ezinkulu.
Ngemuva kokuthi umzimba uguqukele ngokuphelele, umthamo uyandiswa ngokubona kukadokotela obheka isiguli kuze kutholakale umphumela owufunayo. Ukwemukelwa kwe-Finlepsin-400 kuyanconywa nokuthi kuqalwe ngamathebhulethi ayi-0.5, ngemuva kokufunda ngokucophelela imiyalo futhi kwatholakala ukuthi ezinye izidakamizwa nezindlela zokwelapha zihlanganiswa nakho. Ekhemisi, kuthengiswa amaphilisi eFinlepsin emabhokisini amakhadibhodi we-3, 4, 5 blits.
Ngaphandle kwemiyalo ethile kadokotela wakho, amarejimeni alandelayo wethamo asebenza ku-Finlepsin 200 retard. Sicela ulandele imithamo ebekwe udokotela wakho, ngoba uma kungenjalo i-Finlepsin 200 retard ngeke ibe nomphumela wokwelapha!
Kungakanani futhi kufanele usebenzise kangaki i-Finlepsin 200 retard
Ukwelashwa nge-Finlepsin retard engu-200 kuqala ngokucophelela, kunquma umuthi ngemithamo ephansi ngamunye kwisiguli ngasinye, kuya ngohlobo nobunzima besifo. Ngemuva kwalokho umthamo wanda kancane kancane kuze kufike umthamo wokulungisa osebenza ngempumelelo kakhulu. Umthamo ofanele womuthi ezigulini, ikakhulukazi ngokwelashwa okuhlanganiswa, unqunywa lizinga laso le-plasma. Ngokusho okuhlangenwe nakho okuqongelelwe, ukuqoqwa okwelashwa kwe-Finlepsin 200 retard ku-plasma ngu-4-12 μg / ml.
Faka esikhundleni i-antiepileptic eyodwa ne-finlepsin 200 retard kufanele yenziwe kancane kancane, ukunciphisa umthamo womuthi owawusetshenziswa ngaphambili. Uma kungenzeka, i-ejenti elwa ne-antiepileptic isetshenziselwa kuphela i-monotherapy. Inkambo yokwelashwa ibhekwa udokotela onguchwepheshe.
Uhla lomthamo owamukelwa ngokujwayelekile ngu-400-1200 mg we-Finlepsin 200 retard ngosuku, ehlukaniswe ngemithamo eyodwa ye-1-2 ngosuku. Ukweqisa umthamo wansuku zonke we-1200 mg akunangqondo. Umthamo omkhulu wansuku zonke akufanele udlule ku-1600 mg, ngoba imithamo ephakeme ingakhuphula inani lemiphumela emibi.
Kwezinye izimo, umthamo odingekayo ekwelashweni ungaphambuka kakhulu kudosi elinconyiwe kanye nesondlo, ngokwesibonelo, ngenxa yokushesha komzimba ngenxa yokufakwa kwama-enzymes wesibindi wama-microsomal noma ngenxa yokusebenzisana kwezidakamizwa ekwelapheni inhlanganisela.
Ngaphandle kwemiyalo ekhethekile evela kudokotela, baqondiswa iphethini yokubonisa elandelayo yokusetshenziswa kwezidakamizwa:
Ngokuvamile, kubantu abadala, umthamo wokuqala wamatafula we-1-2 we-retard (ohambelana no-200-400 mg we-carbamazepine) ukhuphuka kancane kancane ukuya kumthamo wokulondolozwa kwamacwecwe ama-4- 6 we-retard (ahambelana no-800-1200 mg we-carbamazepine).
Ngokuvamile, umthamo wokulungiswa kwe-carbamazepine wezingane eziphakathi kwe-10-20 mg / kg kwesisindo somzimba ngosuku.
Kunconywa i-dosing schedule elandelayo.
Abadala banqunyelwe ekuseni / kusihlwa 200-300 mg kusihlwa 200-600 mg 400-600 mg
Izingane zinqunyelwe bheka inothi
kusuka eminyakeni engu-6 kuye kweyi-10 kusihlwa I-150-200 mg kusihlwa 200 mg ekuseni ngo-200-400 mg
11 kuya ku-15 ubudala ekuseni / kusihlwa I-150-200 mg kusihlwa 200-400 mg 400-600 mg
Ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-6 ubudala, ngokwelashwa kokuqala nokwesekelwayo, amaphilisi ezenzo ezingezona ezinde ayatholakala. Ngenxa yolwazi olunganele olutholwe ngamathebulethi okubuyisa, awanconywa ezinganeni ezikule minyaka.
Ukuvimbela ukuthuthukiswa kokubandakanyeka kokuxineka nge-syndrome yokuhoxiswa kotshwala esibhedlela
Umthamo ojwayelekile wansuku zonke yi-1 i-tablet yokubuyisa ekuseni, kusihlwa amaphilisi ama-2 okubuyiswa (ahambelana no-600 mg we-carbamazepine). Ezimweni ezinzima, ezinsukwini zokuqala, umthamo ungakhuphuka ube amaphilisi ama-3 wokubuyisa amahlandla ama-2 ngosuku (okuhambelana ne-1200 mg ye-carbamazepine).
Ukubuyiswa kwe-Finlepsin 200 akufanele kuhlanganiswe nezidakamizwa ze-sedative-hypnotic. Ngokuhambisana nezidingo zomtholampilo, noma kunjalo, uma kunesidingo, i-Finlepsin 200 retard ingahlanganiswa nezinye izinto ezisetshenziselwa ukwelapha ukuhoxiswa kotshwala.
Ngesikhathi sokwelashwa, kuyadingeka ukubheka njalo okuqukethwe ama-finlepsin 200 retards ku-plasma yegazi.
Ngokuphathelene nokwenziwa kwemiphumela emibi evela ohlelweni lwezinzwa oluphakathi nolwezinto ezizimele (bheka izehlakalo zokubuyiselwa kotshwala esigabeni esithi "Imiphumela Emibi"), kusungulwa ukubhekisisa iziguli.
I-Trigeminal neuralgia, i-genuin glossopharyngeal neuralgia
Umthamo wokuqala amaphilisi angu-1-2 wokubuyiswa (okuhambelana no-200-400 mg we-carbamazepine), okuthi, kuze kube yilapho izinhlungu ziphela ngokuphelele, lenyuswa ngesilinganiso samaphilisi ama-2-5 wokubuyiswa (okuhambelana no-400-800 mg we-carbamazepine), asatshalaliswa kumthamo owodwa ku-1-2 usuku. Ngemuva kwalokho, engxenyeni ethile yeziguli, ukwelashwa kungaqhubeka nedosi elincane lokulungisa, elingavimba ukuhlaselwa kobuhlungu bethebhulethi le-1 yokubuyisa amahlandla ama-2 ngosuku (elihambelana no-400 mg we-carbamazepine).
Ezigulini esezikhulile futhi ezibucayi, i-Finlepsin 200 retard imiselwe kumthamo wokuqala wethebhulethi engu-1 yembuyiselo kanye ngosuku (kulingana no-200 mg we-carbamazepine).
Ubuhlungu ku-neuropathy yesifo sikashukela
Umthamo ojwayelekile wansuku zonke ukubuyiswa kwethebhulethi ekuseni namaphilisi ama-2 ukubuyiswa kusihlwa (okuhambelana no-600 mg we-carbamazepine). Ezimweni ezihlukile, i-Finlepsin 200 retard ingabekwa kumthamo wamaphilisi ama-3 wokubuyisa amahlandla ama-2 ngosuku (okuhambelana ne-1200 mg ye-carbamazepine).
Isifo sokuwa kwe-epileptiform ku-multiple sclerosis
Umthamo ojwayelekile wansuku zonke amaphilisi we-2 retard izikhathi ezi-2 ngosuku (okuhambelana no-400-800 mg we-carbamazepine).
Ukwelashwa nokuvimbela i-psychosis
Umthamo wokuqala, ovame futhi ngokwanele njengomuthi wokulungisa, ubhebhetheka njengamaphilisi angu-1-2 ngosuku (okuhambelana no-200-400 mg we-carbamazepine). Uma kunesidingo, lo muthi ungakhuphuka ube amaphilisi ama-2 wokubuyisa amahlandla ama-2 ngosuku (okuhambelana no-800 mg we-carbamazepine).
Iziguli ezinezifo ezinzima zenhliziyo, ukulimala kwesibindi nezinso, kanye nabantu asebekhulile babekelwa imithamo ephansi yomuthi.
Kufanele uyithathe kanjani futhi nini i-Finlepsin 200 retard
Amacwecwe e-retard afakwe i-groove ehlukanisayo, athathwa ngesikhathi sokudla noma ngemuva kwawo, ahlanzwa ngomthamo owanele we-ketshezi (ngokwesibonelo, ingilazi yamanzi).
Amacwecwe e-retard angathathwa ngemuva kokuhlakazeka kwabo kokuqala emanzini (ngesimo sokumiswa). Isenzo eside siyaphikelela ngemuva kokuthi ithebhulethi ihlukane namanzi.
Kwezinye izimo, ukusatshalaliswa komthamo wansuku zonke ku-4-5 imithamo eyodwa ngosuku kubonakale kusebenza kakhulu. Kulokhu, amafomu omthamo wesenzo esingesikhathi eside afaneleka kahle.
Kufanele uthathe isikhathi esingakanani i-Finlepsin 200 retard
Isikhathi sokusetshenziswa kuncike izinkomba kanye nokuphendula komuntu ngamunye kwesiguli umuthi.
Isifo sokuwa selashwa isikhathi eside. Udokotela onguchwepheshe kufanele anqume ngokudluliselwa kwesiguli ku-Finlepsin 200 retard, isikhathi sokusetshenziswa nokwesulwa kwaso esimweni ngasinye. Ngokuvamile, ungazama ukwehlisa umthamo womuthi noma umise ngokuphelele ukwelashwa kungakabi nje ukwedlula emva kweminyaka engu-2-3 yokungabanjwa.
Ukwelashwa kumiswa ngokuncipha kancane kancane komthamo womuthi iminyaka engu-1-2. Kulokhu, izingane kufanele zibheke ukwanda kwesisindo somzimba. Izinkomba ze-EEG akufanele zimbi.
Ekwelapheni i-neuralgia, bekuwusizo ukunquma i-Finlepsin 200 retard ku-umthamo wokulungisa, okwanele nje ukudambisa izinhlungu, amasonto ambalwa. Ngokuwehlisa umthamo ngokucophelela, kuyadingeka ukubona ukuthi ukukhululeka okuzenzakalelayo kwezimpawu zesifo kwenzeka. Ngokuqala kabusha kokuhlaselwa kobuhlungu, ukwelashwa kuyaqhubeka ngethamo lokugcina langaphambili.
Isikhathi sokwelashwa ngobuhlungu ku-neuropathy yesifo sikashukela nokuthathwa kokuqina kwezifo ezinhlobonhlobo ku-multiple sclerosis kuyafana neuralgia.
Ukwelashwa kwesifo sokuhoxiswa kotshwala nge-Finlepsin 200 retard kumiswa ukunciphisa okwesikhashana komthamo esikhathini esiyizinsuku eziyi-7 ukuya kwezi-10.
Ukuvimbela izigaba zokuxineka okwenziwa manic kwenziwa isikhathi eside.
Amaphutha ekusebenziseni umuthi kanye ne-overdose
Uma ukhohlwe ukuthatha umthamo owodwa womuthi, khona lapho usheshe uwubone, uwuthathe ngokushesha. Uma kungekudala ngemuva kwalokhu kufanele uthathe umthamo olandelayo obekiwe, khona-ke uyokweqa, bese emva kwalokho uphinde uzame ukufaka irekhodi lakho elifanele lomthamo. Akunjalo, ngemuva komthamo owodwa ukhohliwe, ungathathi umthamo ophindwe kabili we-Finlepsin 200 retard. Uma ungabaza, sicela uxhumane nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwezempilo ukuze uthole usizo!
Okudingayo ukuthi ucabangele uma ufuna ukuphazamisa noma ukuyeka ukwelashwa ngaphambi kwesikhathi
Ukushintsha umthamo ngokwakho noma ukuwuyeka umuthi ngaphandle kokuqashwa ngudokotela kuyingozi! Kulokhu, izimpawu zesifo sakho zingaqhubeka zibe zimbi futhi. Ngaphambi kokuthi uyeke ukuthatha i-Finlepsin 200 uzibambe, kufanele uthintane nodokotela wakho ngalokhu.
Yini okufanele uyenze uma i-Finlepsin 200 retard isithathwe ngobukhulu obukhulu
I-overdose yesidakamizwa idinga ukungenelela okuphuthumayo kwezokwelapha. Isithombe esisetshenziswa ngokweqile kwe-Finlepsin 200 retard sibonakaliswa ukwanda kwemiphumela emibi, njengokuqhaqhazela (ukuthuthumela), ukubanjwa kwenhliziyo kwenzeka lapho ubuchopho bujabule (ukukhishwa kwamathoni), ukuyaluza, kanye nokuphefumula kanye nokusebenza kwenhliziyo okuvame ukuncishiswa. (ngesinye isikhathi iphakamise) umfutho wegazi, ukukhuphuka kwenhliziyo (i-tachycardia) nokuphazamiseka kokukhishwa kwenhliziyo (i-atrioventricular block, izinguquko ze-ECG), ukungaboni kahle kuze kufinyelele ukuboshwa zokuphefumula kanye ukuboshwa inhliziyo. Ezimweni ezingazodwa, i-leukocytosis, i-leukopenia, i-neutropenia, i-glucosuria noma i-acetonuria yabonwa, eyasungulwa izinkomba eziguquliwe zokuhlolwa kwelebhu.
Asikho i-antidote ethile yokwelashwa kobuthi obuyingozi nge-retlepsin 200 retard. Ukwelashwa kwe-overdoses of retlepsin 200 retards, njengomthetho, kwenziwa ngokuya ngezibonakaliso ezibuhlungu esibhedlela.
Imiphumela emibi ebonakalayo ivame ukwenzeka ngokwelashwa okuhlangene kunokwelashwa nge-monotherapy. Ngokuya umthamo futhi ikakhulukazi ekuqaleni kokwelashwa, imiphumela emibi elandelayo ingenzeka:
I-Central Nervous System / Ingqondo
Isibindi sokuqwashisa, ukungazi kahle (ukugwinya), isiyezi, ukukhathala, ukungasebenzi kahle (i-cerebellar ataxia) kanye nokulimala kwekhanda kungavame ukwenzeka. Iziguli esezikhulile zingase zibe nokudideka nokukhathazeka.
Ezimweni ezikhethekile, isimo esidabukisayo sokudangala, ukuziphatha okunolaka, ukubekezela kokucabanga, ukungaziphathi kahle kwezinjongo, kanye nokuphazamiseka kwengqondo (ukubona imibono) kanye ne-tinnitus kuyabonakala. Lapho welapha i-Finlepsin 200 retard, ama-psychent angama-latent angasebenza.
Ukunyakaza okuzenzakalelayo kuyaqabukela kwenzeka, njengokuqhaqhazela kwamalahle, ukusikwa kwemisipha, noma ukusonta kwe-eyeball (nystagmus). Ngaphezu kwalokho, ezigulini esezikhulile kanye nezilonda zobuchopho, ukuphazamiseka kwezenzo zezimoto ezihambisanayo kungenzeka, njengokunyakaza okungahleliwe esifundeni se-rotolitic ngesimo se-grimacing (i-rotolitic dyskinesias), ukunyakaza okujikelezayo (choreoathetosis). Ezinye izimo zokuphazamiseka kwengqondo, imizwa yamanga, ubuthakathaka bemisipha, ukuvuvukala kwezinzwa (i-peripheral neuritis), kanye nokuvezwa kwezimpawu zokulimala kwemilenze ephansi (i-paresis) nokuphazamiseka kokuqonda ukunambitheka kubikwa.
Iningi lalezizimo zinyamalala zizodwa ngemuva kwezinsuku eziyi-8-14 noma ngemuva kokuncishiswa komthamo wesikhashana. Ngakho-ke, uma kungenzeka, i-Finlepsin 200 retard ikhishwa ngokucophelela, iqala ukwelashwa ngemithamo ephansi, bese uyandisa kancane kancane.
Kwezinye izimo, bekukhona ukuqubuka kolwelwesi lwesitho (i-conjunctivitis), kwesinye isikhathi ukuphazamiseka okubukwayo okwesikhashana (indawo yokuhlala yamehlo, ukubuka okuphindwe kabili, umbono ofiphele). Amacala e-lens opacization abikiwe.
Ezigulini ezine-glaucoma, kuyadingeka ukukala njalo ukucindezelwa kwe-intraocular.
Ezimweni ezingazodwa, izinhlungu zazibonakala emalungeni nasemisipha (i-arthralgia, myalgia) kanye nakuwo imisipha yemisipha. Lezi zimo zinyamalale ngemuva kokuqedwa kwomuthi.
Isikhumba nolwelwesi lwe-mucous
Amacala okuphendula kwesikhumba kwe-allergic noma ngaphandle komkhuhlane kuye kwabikwa, njengokuthi akuvamile noma kwenzeka njalo i-urticaria (urticaria), ukulunywa, kwesinye isikhathi ipuleti enkulu noma ukuvuvukala kwesikhumba (i-exermative dermatitis, i-erythroderma), i-necrosis engaphezulu kwesikhumba ngokuqhakaza (isifo I-Lyell), i-photosensitivity (i-photosensitivity), ubomvu besikhumba ngama-polymorphic rashes ngendlela yamabala kanye nokwakheka kwezindawo ezinama-hemorrhages (exryative erythema multiforme, erythema nodosum, Johnson), nokopha petechial esikhumbeni, futhi omzimba izicubu erythematosus (lupus erythematosus eqonda).
Ezimweni ezihlukile noma ezingavamile, kwaphawulwa ukuqothuka kwezinwele (i-alopecia) kanye nokujuluka (diaphoresis).
Isistimu yokujikeleza nokujikeleza komzimba
Mayelana nokusabela kwe-hypersensitivity ekwelashweni kwe-Finlepsin 200 retard, ngaphezu kwalokho, ukuphazamiseka kwesithombe segazi okulandelayo kungenzeka: kungajwayelekile noma kuvame ukwanda (i-leukocytosis, i-eosinophilia) noma ukuncipha (i-leukopenia) ngenombolo ye-leukocytes noma ama-platelet (thrombocytopenia) egazini le-peripheral. Ngokusho kwezincwadi, indlela ebukeka kahle ye-leukopenia ihlala ivela (ihlala kancane kumaphesenti ayi-10 wamacala, iphikelele kuma-2% amacala).
Kubikwa ngamacala angafani nezifo zegazi, kwesinye isikhathi okubeka engcupheni nempilo, njenge-agranulocytosis, i-aplastic anemia, kanye nezinye izindlela ze-anemia (hemolytic, megaloblastic), kanye nokwanda komgogodla nama-lymph node.
Ngokuvela kwe-leukopenia (imvamisa kakhulu i-neutropenia), i-thrombocytopenia, i-allergic ganda rashes (exanthema) kanye ne-fever finlepsin retard 200 retout.
Kwesinye isikhathi kuncipha ukudla, umlomo owomile, isicanucanu nokuhlanza, isifo sohudo noma ukuqunjelwa akuvamile ukwenzeka. Kuze kwabikwa ukuthi kuye kwabikwa amacala asezingeni lobuhlungu besisu nokuvuvukala kolwelwesi lwe-oropharynx cavity (stomatitis, gingivitis, glossitis). Lezi zimo zidlula ngokwazo ngemuva kwezinsuku eziyi-8-14 zokwelashwa noma ngemuva kokwehliswa kwesikhashana komthamo womuthi. Zingagwenywa ukuqokwa kokuqala kwemithamo ephansi yomuthi ngokwanda kwawo kancane kancane.
Kunezinkomba ezincwadini ukuthi i-carbamazepine ngesinye isikhathi ingadala ukuvuvukala kwepancreas (pancreatitis).
Kwesinye isikhathi kushintsha izinkomba zokuhlolwa kwesibindi okusebenzayo, ezimweni ezingandile i-jaundice ivela; ezimweni ezingandile, kuvela izinhlobo ezahlukene ze-hepatitis (cholestatic, hepatocellular, granulomatous, exubile).
Kuchazwe amacala amabili we-porphyria acute.
Hormonal, amanzi nosawoti metabolism
Kuze kwabikwa ukuthi kuye kwanda izigameko zokunwetshwa kwesifuba kwabesilisa (i-gynecomastia) nokuphuma ngaphandle kobisi kusuka kwizindlala zezilwane ezincelisayo kubantu besifazane (galactorrhea).
Ukubuyiswa kwe-Finlepsin 200 kungathinta amapharamitha wokusebenza kwe-thyroid (triiodothyronine, thyroxine, i-hormone egqugquzela i-thyroid kanye ne-thyroxine yamahhala), ikakhulukazi uma ihlanganiswa nezinye izidakamizwa ze-antiepileptic.
Ngenxa yesenzo se-Finlepsin 200 retard, esinciphisa ukuphuma komchamo kusuka emzimbeni (umphumela we-antidiuretic), ezimweni ezingavamile, ukwehla kwe-serum sodium (hyponatremia) kungahle kubonwe, kuhambisane nokuhlanza, ikhanda kanye nokudideka.
Amacala ahlukile wokubonakala kwe-edema kanye nokunyuka kwesisindo somzimba abonwa. I-Finlepsin 200 retard inganciphisa amazinga we-serum calcium. Ezimweni ezingazodwa, lokhu kuholela ekuthambiseni amathambo (i-osteomalacia).
Amacala ahlukene okuvela kokuzwa kokukhula kokuzwakala kwamaphaphu kulo muthi, kuhambisana nomkhuhlane, ukuphefumula komoya (i-dyspnea), i-pneumonia ne-pulmonary fibrosis.
Akuvamile ukuthi kube khona umsebenzi wezinso ophazamisekile, ovezwe ngokuqukethwe kwamaprotheni kumchamo (i-proteinuria), ukuvela kwegazi kumchamo (i-hematuria), ukuncipha kokuchama komchamo (oliguria), ezimweni ezingavamile bakhula kuze kwehlule izinso. Mhlawumbe lokhu kuphazamiseka kubangelwa umphumela wokungaphakathi we-antidiuretic womuthi. Kwesinye isikhathi i-dysuria, i-polakiuria kanye nokugcinwa komchamo kwenzeka.
Ngaphezu kwalokho, kunezimo ezaziwayo zokungasebenzi kahle kwezocansi, njengokungabi namandla nokuncipha kwesifiso sobulili.
Ezimweni ezingavamile noma ezingazodwa, ikakhulukazi kubantu asebekhulile noma ezigulini ezinokungasebenzi kahle kwenhliziyo, ukwehla kwenhliziyo (i-bradycardia), ukuphazamiseka kwesigqi senhliziyo, kanye nokwanda kwesifo senhliziyo.
Akuvamile ukuthi kube nokuphulwa kokukhishwa kwenhliziyo (block atrioventricular block), ezimweni ezikhethekile ezihambisana nokuduma. Ngaphezu kwalokho, kwezinye izimo, umfutho wegazi uyancipha noma uphakame. Ukwehla kwengcindezi yegazi kwenzeka ikakhulu ngokusetshenziswa komuthi emithamo ephezulu.
Ngaphezu kwalokho, i-vasculitis, i-thrombophlebitis, ne-thromboembolism yabonwa.
Ukubambezeleka kokuphendula kwe-hypersensitivity kulo muthi kuyaqabukela kwenzeka, kwenzeka ngomkhuhlane, ukuqhuma kwesikhumba, ukuvuvukala kwemisipha, ukuvuvukala kwama-lymph nodes, izinhlungu ezihlangene, inani elishintshiwe lamangqamuzana amhlophe egazi egazini le-peripheral, isibindi esandisiwe nesigaqa, kanye nokushintshwa kwemingcele yokuhlolwa kwesibindi kusebenza okungenzeka ngokuhlukahluka inhlanganisela, futhi kubandakanya nezinye izitho zenqubo, njengamaphaphu, izinso, amanyikwe kanye ne-myocardium.
Ezimweni ezingafani nalutho, ukubonwa okubucayi okubucayi kanye nokulimazeka kokutholakala kwamamitha nge-myoclonus ne-eosinophilia kwaqapheleka.
Uma ubona imiphumela emibi engashiwongo kulokhu okuchazayo, sicela wazise udokotela wakho noma usokhemisi ngalokhu.
Yiziphi izinyathelo okufanele zithathwe nemiphumela emibi
Uma ubona imiphumela emibi echazwe ngenhla, khona-ke yazisa udokotela wakho ukuthi ngubani ozonquma ubucayi bawo futhi athathe izinyathelo zokulwa nazo (bheka isigaba esithi "Izindlela Zokuphepha Ezisebenzayo"). Ikakhulu uma kunomkhuhlane, umphimbo obuhlungu, ukusikeka komzimba kwesikhumba ngendlela yokuqunjelwa ngama-lymph node akhulayo kanye / noma izimpawu ezibucayi ngesikhathi sokwelashwa nge-retlepsin 200 retards, kufanele uthintane nodokotela ngokushesha futhi uhlaziye isithombe segazi.
Ngokuthuthuka kokuphazamiseka okukhulu komzimba, i-Finlepsin 200 retard ikhanseliwe ngokushesha.
Lapho kwenzeka ushintsho oluthile esithombeni segazi (i-leukopenia, imvamisa ye-neutropenia, i-thrombocytopenia), ukuqubuka kwesikhumba komzimba (exanthema) ne-fever finlepsin ama-200 retard kukhanseliwe.
Uma kunezimpawu zokulimala kwesibindi noma umsebenzi okhubazekile, njengokulimala, ukuntuleka kokudla, isicanucanu, umbala wesikhumba ophuzi noma ukwanda kwesibindi, ngokushesha bonana nodokotela.
Usuku lokuphela kwezidakamizwa
Ukuphila eshalofini kwamathebulethi okukhoseliswa kukhonjisiwe ku-foil yesembozo se-blister strip kanye ebhokisini lekhadibhodi.
Ngemuva kwesikhathi esibekiwe, ungasebenzisi izibhebhe eziningi zokugcina zale phakheji.
Imithi igcinwa ingatholakali ezinganeni!
IFinlepsin 200 retard iza emaphaketheni ephephile ezinganeni enogwebu olunamathela oluningi. Uma kwenzeka kunzima kuwe ukucindezela i-retard tablet, khona-ke ngaphambi kokukwenza lokhu, sikucebisa ukuthi udambise i-foil elula ukumboza.
Umuthi ugcinwa ngaphansi kwezimo ezijwayelekile.
IFinlepsin 200 retard itholakala emaphaketheni angama-50, 100, kanye namaphilisi okubuyisa ama-200.
Uma kungenzeka, i-Finlepsin ® retard inqunyelwe kwabesifazane abaneminyaka yobudala bokuzala njenge-monotherapy, kumthamo osebenza ngokulingene, imvamisa yokulimala kokuzalwa okusha kwezingane ezisanda kuthathwa ekwelapheni i-antiepileptic iphezulu kune-monotherapy.
Lapho ukukhulelwa kwenzeka, kuyadingeka ukuqhathanisa inzuzo elindelekile yokwelashwa kanye nezinkinga ezingenzeka, ikakhulukazi ku-trimester yokuqala yokukhulelwa.
Kuyaziwa ukuthi izingane zabomama abahlushwa isithuthwane zinqunyelwa ukuthi ziphazamiseke ekukhuleni kwe-intrauterine, okubandakanya ukungasebenzi kahle. IFinlepsin ® retard iyakwazi ukwandisa ubungozi balezi ziphazamiso. Kunemibiko engafani ngamacala ezifo zokuzala kanye nokungahambi kahle, kufaka phakathi ukungavalwa kwama-vertebral arches. (spina bifida). Izidakamizwa ze-antiepileptic zandisa ukuntuleka kwe-folic acid, ezivame ukubonwa ngesikhathi sokukhulelwa, ezingakhulisa izehlakalo zokulimazeka ezinganeni, ngakho-ke i-folic acid iyanconywa ngaphambi kokukhulelwa okuhleliwe nangesikhathi sokukhulelwa. Ukuze uvikele izingqinamba ze-hemorrhagic ezinganeni ezisanda kuzalwa, kunconyelwa ukuthi abesifazane emavikini okugcina okukhulelwa, kanye nezingane ezisanda kuzalwa, banikezwe i-Vitamin K.
I-Carbamazepine idlulela kubisi lwebele, ngakho-ke izinzuzo nemiphumela engafuneki yokuncelisa ibele kufanele iqhathaniswe nokwelashwa okuqhubekayo. Ngokuqhubeka ukuncelisa ibele ngenkathi uphuza umuthi, kufanele kuqashelwe ukuqapha ingane mayelana nokuthola imiphumela emibi (ngokwesibonelo, ukozela kakhulu, ukusabela kwesikhumba esibi komzimba).
Imisebenzi ye-Teva Poland Sp. z oo, st. IMogilska 80, 31-564 Krakow, ePoland.
Igama lenhlangano esemthethweni ekhishwe igama layo isitifiketi sobhaliso. I-Teva Pharmaceutical Enterprise Ltd., i-Israel.
Izimangalo zabathengi kufanele zithunyelwe ekhelini: 115054, Moscow, ul. Umdwebo, 35.
Ucingo: (495) 644-22-34, ifeksi: (495) 644-22-35 / 36.
Imiyalo yokusebenzisa i-Finlepsin retard
Ngokusho kwemiyalo, ukusebenza ngempumelelo kwalo muthi akuhlobene neze nokusetshenziswa kokudla, ngakho-ke ungakwazi ukuwuphuza nganoma yisiphi isikhathi. Ukwelapha isithuthwane, i-Finlepsin isetshenziswa njenge-monotherapy, ngaphandle kokuxhuma ezinye izidakamizwa. Umthamo ubalwa ngokucophelela iminyaka ehlukene, kuqala ngobuncane futhi bukhula kancane kancane. Ngokwemiyalo yabantu abadala, kusetshenziswa imithamo yansuku zonke elandelayo:
kokuqala - 200-400 mg,
okwelapha noma okusekelayo - 800-1200 mg,
esiphezulu yi-1600-2000 mg.
Leli nani le-carbamazepine lingumuntu ngamunye, lihlukaniswe ngemithamo engu-3-4. Uma isiguli siphuthelwe ipilisi nganoma yisiphi isizathu, khona-ke akufanele uphuze amabili ngasikhathi sinye ukuze ugweme ukuphuza ngokweqile. Ekwelapheni kwezingane, umthamo wansuku zonke uxhomeke eminyakeni yobudala, kancane kancane inyuka ngo-100 mg kuze kube yilapho imiphumela oyifunayo itholakala:
Iminyaka engu-1-5 - 100-200 kuye ku-400 mg,
Iminyaka engama-6 ukuya kwengama-60 ukuya kwengama-200 kuya kwangama-600 mg,
Iminyaka eyi-11-15 - 300-400 kuya ku-1000 mg.
Isikhathi sokuthatha i-Finlepsin kufanele silawulwe ngudokotela, sigxile enhlalakahleni yesiguli. Kwezinye izimo, kuthatha iminyaka eminingana ukuthi ukuhlaselwa kuphele. Umthamo uyancishiswa ngemuva kokwelashwa okuphumelelayo kanye nokungabikho kokuthathwa kweminyaka emithathu. Indlela engcono yokuhlola ukusebenza kwe-Finlepsin therapy ukuthi une-electroencephalogram yobuchopho.
Intengo ye-Finlepsin Return
Ngemuva kokuqokwa kukadokotela, kufanele uthenge uhlobo oluhle lwemithi bese uqala ukuyiphuza. Umehluko ngentengo yeFinlepsin eSt. Petersburg naseMoscow kuya ngesibalo samaphilisi, okufaka, umthamo.
I-Finlepsin-200, ama-50 ama-pcs.
I-Finlepsin-400, ama-30 ama-pcs.
I-Finlepsin-400, ama-50 ama-pcs.
E-Russia, ukuthengiswa kwe-Finlepsin retard kwenziwa yi-EPVA yomkhiqizi wasePoland. Lapho umuthi ungasifanele isiguli, udokotela angakhetha enye yezimpawu zika-Finlepsin. Imithi inezakhi ezifanayo, inezici ezifanayo. Analogs, ngokungafani neyasekuqaleni, ashibhile, kepha abe neminye imiphumela emibi, ngakho-ke akutuswa ukuba ungene esikhundleni sakho i-Finlepsin.
Uhlu lwezidakamizwa ezisebenza kahle ze-antiepileptic zifaka:
URegina, oneminyaka engama-53 ubudala. Ngaphuza uFinlepsin izinyanga ezi-2, lapho udokotela anginikeza sona ngemuva kokulimala i-nerve ye-trigeminal nerve. Ngangixwayiswa ukuthi umuthi unemiphumela emibi eminingi, ngakho-ke ngaqala ukuthatha uhhafu wethebhulethi ekuqaleni. Kwakungenakwenzeka ukugwema isenzo esingesihle ngokuphelele - ekuseni nganginesiyezi, kodwa kungenjalo uFinlepsin wangisiza.
UJulia, oneminyaka engama-35 ubudala. Ngosizo lwale Finlepsin, ngelapha ekwelapheni kwengane. Ithebhulethi ihlanjululwe kusiraphu. Kwakudingeka ngibekezelele ukuhlaselwa ukudakwa kanye nauseuse kancane, kodwa ngonyaka owodwa wokuvuma ngaphansi kokuqondisa kukachwepheshe, sikwazile ukugwema ukubanjwa umkhuhlane wokuwa. Sizamile ukushintshela kumuthi ofanayo, ohluka ngezindleko, kodwa bekungafanele.
U-Eugene, oneminyaka engama-47 wasebenzisa uFinlepsin ngokudangala oselulekwe udokotela wezifo zengqondo. Ngayala ukuthenga esitolo online ukulethwa ngeposi. Ngokwesaphulelo, kwavela ukuthi akubizi kangako. Udokotela wangixwayisa ukuthi ngingazihlanganisi i-Finlepsin notshwala, ngaphandle kwalokho imiphumela emibi izakuba mibi kakhulu kunendlela echazwe ngayo efingweni yemithi. Angikukhuthazi ukuphuza umuthi ngaphandle kadokotela.